Ministirri duraanii fi Hoogganaan olaanaa 'TPLF' Geetaachoo Raddaa, gaaffiifi deebii gaazexeessaa BBC Alan Kaasuujaa waliin taasiseen, ''MM Abiy Ahimad garmalee lellifamaa jira,'' jedha. Kichuu
HomeNewsAfricaMinistirri duraanii fi Hoogganaan olaanaa ‘TPLF’ Geetaachoo Raddaa, gaaffiifi deebii gaazexeessaa BBC Alan Kaasuujaa waliin taasiseen, ”MM Abiy Ahimad garmalee lellifamaa jira,” jedha.
‘Abiy Ahimad MM biyyattii guutuu ta’uu qaba’
(bbcafaanoromoo)—-Gaazexeessaan BBC Alan Kasuujaa gara Maqaleetti imaluun haala siyaasaa Itoophiyaa ammaa irratti Obbo Geetachoo Raddaa waliin turtii taasisee ture.
Waa’ee MM Abiy Ahimad paartiin naannoo Tigraay bulchu ‘TPLF’ ilaalcha akkamii akka qabuufi Obbo Geetachoonis akka dhunfaatti MM Abiy akkamiin akka hubatu gaafateera.
MM Abiy Ahimad kaka’umsa isaafi murtee irra gahuuf ija jabina inni qabu nan dinqisiifadha jedhu Obbo Geetachoon.
“Wanta hunda raawwachuuf fedhii qaba. Sodaan koo garuu fedhii uummataa jiddugala hin godhatu taanaan, waan hunda milkeessuuf osoo jedhuu waan hunda dhabuu danda’a.”
“Si’aayinaa fi fedhii amma agarsiisaa jiruun ammallee waan gaarii abdanna. Garuu ‘hulaan gara si’ool geessu yaaduma gaariin baname’ isa jedhu sana akka hin taane” jedhan.
MM Abiy pireezidantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqii waliin araara kan buusan isin ‘TPLF’ akka rakkoo itti hin uumne jedhaniiti jedhama yaada jedhuuf deebii yoo kennan, “nuyi Abiyyitti rakkoo taanee hin beeknu” jedhan.
”Nuti Abiyyitti gufuu taanee hin beeknu. Namoonni dhuunfaa jiraachuu malu. Akkuma ODP, ADP fi paartii warra Kibbaa keessa jiran jechuudha. Ani garuu Abiy walin rakkoo homaatuu hin qabu” jedhu.
“Akka ati jette Abiy Isaayyas waliin shira xaxee nuun moggaatti nu baasuuf hojjetaa jira yoo ta’e kun murtee sirrii miti. Akkan yaadutti Abiy nama gowwaa waan akkasii raawwatu miti.”
Wayita kana naaf deebistu fuula kee irraa waan aarte fakkaatta jedheen gaaxexessaan BBC, ”Eeyyee, sababni inni paartii waahila isaa moggaatti qabuuf hin jiru” jedhan Obbo Geetaachoon.
Yoo Abiy Isaayyaas waliin ta’uun ‘TPLF’ irratti shira hojjechaa jira tahe lolatti galtuu? Gaaffii BBC irraa dhiyaateef ture.
”Lolatti ni gallas, ni dhiisnas hin jedhu. Garuu akkuma jette yoo gochaa jiru tahe ammoo eeyyee ni lolla” jechuun deebisan.
Abiy maal akka hojjetu barbaaddu?
Ministirri Muummee Abiy Ministira Muummee kan biyyattii ta’uu qaba, kan guutuu biyyattii ta’uu qaba jedhu Obbo Geetaachoo Raddaa.
Akkas ta’uuf yaalaa jiraatus sadarkaa ta’uu qabutti garuu waan ta’e natti hin fakkaatu. Fedhii saba hundaa walqixa keessummeessuu qaba.
Kan aangootti isa fide sodaa dargaggoonni dhabamuu carraa hojiirraa qabaniidha. Itoophiyaan saffisaan guddachaa jirti jedhama.
Ammas dargagota muraasatu hojii argate. Waadaa seenuun qofa rakkinicha hin furu.
Bilisummaan isa duraa caalaa jiraa?
”Eeyyee” bilisummaan caalu jira.
Uummati baay’een isa duraa caalaa daandii irratti argaa jirra. Yoo waliin taane biyya kana sooromsuu dandeenya.
Miidiyaaleen idila adunyaa kan akka BBC, CNN, fi Aljeeziraa waa’ee Abiy Ahimed ol kaasanii odeessaa jiru, ”kana Abiy matumti isaa iyyuu ni beeka” jedhu Obbo Geetachoon.
Hawaasni idil addunyaa gaafa si jajan ‘ana malee namni hin jiru jettee akka yaaddu si taasisu’ jedhu.
“Waanti guddaan uummata kee waliin hariiroo gaarii uumuun hojjechuudha” jedhu